NJEHIE 0X80004005 NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Mgbasa ozi na-emenye egwu na weebụsaịtị - nke a ka ọkara nsogbu. Mgbasa mgbasa ozi nke si na nchọgharị gaa na usoro ahụ ma gosipụta mgbe, dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị weebụ na-agba ọsọ - nke a bụ ezigbo ọdachi. Iji tufuo mgbasa ozi na Yandex nchọgharị ma ọ bụ na ihe nchọgharị ọ bụla, ị ga-achọ ịrụ ọrụ dị iche iche, nke anyị na-agwa ugbu a.
Lee kwa: Mgbasa mgbasa ozi na saịtị na Yandex Browser
Ụzọ iji gbanyụọ mgbasa ozi
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere mgbasa ozi na saịtị ndị na-ehichapụ site na ntanetị nchọgharị, mana site na mgbasa ozi abanyela na usoro ahụ, ntụziaka a ga-aba uru maka gị. Site n'enyemaka ya, ị nwere ike iwepu mgbasa ozi na Yandex nchọgharị ma ọ bụ na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Ngwa ngwa anyi choro iburu n'uche na odi oke mkpa iji mezuo usoro ndi a mgbe ufodu. Lelee nnweta mgbasa ozi mgbe usoro ọ bụla agwụchara, ka ị ghara ịhapụ oge dị ukwuu ịchọ ihe echebiworị.
Usoro 1. Nhichapu ndị ụsụụ ndị agha
Ndị ọbịa bụ faịlụ na-echekwa ngalaba, na ndị nchọgharị na-eji tupu ịnweta DNS. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya, ọ nwere ihe dị mkpa, nke mere na ndị ọgba ọsọ na-edeba adreesị na mgbasa ozi na faịlụ a, nke anyị na-agba mbọ wepụ.
Ebe ọ bụ na faịlụ ndị a na-enweta bụ faịlụ ederede, onye ọ bụla nwere ike dezie ya, naanị site na ịmeghe ya na ntinye ederede. Ya mere, otu a ka esi eme ya:
Anyị na-agafe n'ụzọ C: Windows System32 ọkwọ ụgbọala na wdg ma chọta faịlụ ụsụụ ndị agha. Pịa ya ugboro abụọ na bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe nakwa na aro ịhọrọ ụzọ ịmepe faịlụ, họrọ "Notepad".
Wepụ ihe niile dị n'azụ akara ahụ :: 1 localhost. Ọ bụrụ na akara a abụghị, mgbe ahụ, anyị na-ehichapụ ihe niile na-abịa MAGWU akara 127.0.0.1 localhost.
Mgbe nke ahụ gasịrị, chekwaa faịlụ ahụ, maliteghachi PC ma lelee nchọgharị maka mgbasa ozi.
Cheta ihe di iche iche:
• Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịchekwa na ala nke faịlụ ka ndị na-ege ntị ghara iche na faịlụ dị ọcha. Pịgharịa windo òké na njedebe;
• Iji gbochie ngbanwe dị otú ahụ na-akwadoghị nke faịlụ ụsụụ ndị agha, debe àgwà ndị dị na yaNaanị gụọ ya".
Usoro 2. Ịwụnye antivirus
Ọtụtụ mgbe, kọmputa ndị nchekwa antivirus anaghị echebe. Ya mere, ụzọ kasị mfe bụ iji antivirus. Anyị akwadebelarị ọtụtụ isiokwu banyere antiviruses, ebe ị nwere ike ịhọrọ onye nchebe gị:
Comodo Free Antivirus;
Free antivirus Iobit Malware Fighter;
Geekwa ntị na isiokwu anyị:
Nhọrọ nke mmemme maka iwepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị
Free virus Doppler njirimara na nje kọmputa Dr.Web CureIt;
A virus n'efu na-abanye uru na kọmputa nje.
A ghaghị icheta na ahịrịokwu ikpeazụ ikpeazụ abụghị antiviruses, ma ọ bụ scanners nkịtị ndị e mere iji wepu ngwá ọrụ bọtịnụ na ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ na ihe nchọgharị. Anyị gụnyere ha na ndepụta a, n'ihi na free antiviruses apụghị inyere aka wepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị. Na mgbakwunye, scanners bụ ngwá ọrụ otu oge ma jiri ya mgbe ọrịa, dị ka antiviruses, onye ọrụ ya na-egbochi ọrịa nke PC.
Usoro 3: Gbanyụọ onye nnọchiteanya
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị gụnyeghị onye nnọchiteanya, ndị agha ahụ gaara eme ya. Ị nwere ike iwepu ntọala ndị a dị ka ndị a: Malite > Ogwe njikwa > Network na Intaneti (ma ọ bụrụ na ị na-eme nchọgharị site na otu) ma ọ bụ Njirimara Ịntanetị / ihe nchọgharị (ma ọ bụrụ na ị na-ekiri site na akara ngosi).
Na windo nke meghere, gbanwee gaa na "Njikọ"Na njikọ mpaghara, pịa"Nhazi usoro", nakwa na wireless -"Nhazi".
Na windo ọhụrụ anyị na-ele anya, enwere ntọala ọ bụla na ngọngọ ahụ "Nchịkọta proxy"Ọ bụrụ na e nwere, wepụ ha, gbanyụọ nhọrọ ahụ"Jiri nchịkọta proxy"pịa"Ok"na window a na window nke mbụ, anyị na-enyocha nsonaazụ na nchọgharị ahụ.
Usoro 4: Lelee ntọala DNS
Malịa nwere ike gbanwere ntọala DNS, ọbụnadị mgbe ihichapụ ha ị na-ahụ mgbasa ozi. A na edozi nsogbu a naanị: ịwụnye DNS ndị ahụ PC gị jiri.
Iji mee nke a, pịa akara ngosi njikọ ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ "Network na Sharing Center".
Na windo nke mepee, họrọ "Njikọ LAN"na window ọhụrụ ahụ pịa"Njirimara".
Tab "Network"họrọ"Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)", ma ọ bụ ọ bụrụ na i mejupụtara mbipute 6, mgbe ahụ TCP / IPv6, wee họrọ"Njirimara".
Maka njikọ ikuku na Network na Sharing Center, n'akụkụ aka ekpe nke windo, họrọ "Gbanwee ntọala nkwụnye", chọta njikọ gị, pịa ya ma pịa"Njirimara".
Imirikiti ndị na-ahụ maka ịntanetị na-enye adreesị DNS akpaghị aka, mana na ụfọdụ, ndị ọrụ na-enye ha iwu n'onwe ha. Adreesị ndị a dị na akwụkwọ ahụ ị nwetara mgbe ị jikọtara ISP gị. Enwere ike nweta DNS site na ịkpọ nkwado nkwado nke onye na-eweta Ịntanetị.
Ọ bụrụ na DNS gị adịla mgbe akpaka, ma ugbu a, ị na-ahụ aka DNS ederede aka, wee wepụ ha kpamkpam wee gbanwee gaa nchịkọta adreesị nke akpọrọ. Ọ bụrụ na ị maghị otú e si enye adreesị, anyị na-akwado iji ụzọ ndị dị n'elu chọọ gị DNS.
Ọ nwere ike ịdị mkpa ịmalitegharịa PC iji wepụ mgbasa ozi na nchọgharị.
Nzọụkwụ 5. Wepụ kpam kpam ihe nchọgharị ahụ
Ọ bụrụ na ụzọ gara aga enyereghị gị aka, na ụfọdụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji wepụ ihe nchọgharị ahụ wee wụnye ya, yabụ na-ekwu okwu, site na ncha. Iji mee nke a, anyị dere okwu abụọ dị iche iche banyere mkpochapụ zuru ezu nke Yandex.Browser na nrụnye ya:
Esi wepụ Yandex Nchọgharị na kọmputa gị?
Esi tinye Yandex Browser na kọmputa m?
Dịka ị pụrụ ịhụ, iwepụ mgbasa ozi site na ihe nchọgharị ahụ adịghị esiri ike, ma ọ nwere ike iwe oge. N'ọdịnihu, iji belata ike ịmaliteghachi ọrịa, gbalịa ịhọrọ ihe ọzọ mgbe ị na-eleta saịtị na nbudata faịlụ site na Ịntanetị. Echefukwala banyere wụnye nchedo nje na PC gị.